Read In English, 01 ဧပြီ 2018 page 1
1 ဧပြီ 2018 တနင်္ဂနွေ
Amid Myanmar Swine Flu Outbreak Atmosphere of Mistrust Prevails
Myanmar officials have appealed for calm amid swine flu deaths, but it hasn’t always worked.
27 ဇူလိုင်၊ 2017
Myanmar Lawmakers to Open Discussion of Critical UN Rights Report
Lawmakers in Naypyidaw have approvedamotion by the ruling National League for Democracy party (NLD) to open discussion ofaU.N. report that sharply criticizes Myanmar’s treatment of its Rohingya minority. The move could lead the government to refuse to accept the U.N. document.
25 ဇူလိုင်၊ 2017
Advocates in Myanmar say amendments to controversial online defamation law welcome but not enough.
24 ဇူလိုင်၊ 2017
Trial of Three Myanmar Journalists Marred by Lack of Access, Transparency
A lack of transparency surroundingahigh-profile case involving three journalists is raising concerns over the trial's independence.
ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု ပူးပေါင်းကြံစည်သူဇေယျာဖြိုး ၅ နှစ်ပြစ်ဒဏ် မလုံလောက်ဟု ဥပဒေပညာရှင်တွေသုံးသပ်
ချင်းတိုင်းရင်းသား Dragon Leg နပန်းသမား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီကြိုးပမ်းမှု
ဆိုင်ကလုန်းဒဏ် ခံကြရမည့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ အရေး နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ စိုးရိမ်
စစ်ရှောင်ရွာသား ၁၃ ဦး မတရားအသင်းဆက်နွယ်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရ
ခြေဥပြင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်စာရင်း လွှတ်တော်အတည်ပြု
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကော်မတီ အလုပ်ဖြစ် မဖြစ် (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း)